Destinia, Falanqaynta Ciyaarta | Androidsis
Zack | | Ciyaaraha Android, Reviews
Duke wuxuu ku laabtay si uu u helo magaaladiisii ​​oo ay xoog ku qabsadeen ciidamadii Imperial. Wuxuu si ba'an u raadiyaa caruurnimadiisa jacaylka Lena, laakiin wadada waxay leedahay qataro ku dhuumaaleysanaya wax walbana way xumaadaan.
Sidan ayey ku bilaabaneysaa AAKHIRO, yaabkan RPG ee loogu talagalay Android.
Sheekadu waxay ku saabsan tahay Duke, oo la ciqaabo ka dib markii uu adeeco amarrada ka sarreeya, oo lagu xiray meel god ah oo ay badbaadiyeen koox jabhad ah oo uu hoggaamiyo Cristal.
Ku saabsan sawirada waxaan heleynaa ciyaar aad u midabo badan oo faahfaahsan. Waxay si fiican loo barbar dhigi karaa ciyaaraha Nintendo DS. Waxay leedahay saameyn muuqaal oo aad u wanaagsan, iyo sidoo kale inaad weerarto, markaad lahadleyso jilayaal kale, iwm.
Dabeecada aan ku xakameyn doonno ciyaarta waxay kordhisaa heerarka sida uu u helo khibrad cadawga dila. Hawlgallada waxaa noo aaminin doona jilayaasha in aan ka heli doonno ciyaarta oo dhan (qaab aad u WoW ah). Heer kasta waxay na siin doonaan dhibco xirfadeed, oo aan u adeegsan karno laamo kala duwan oo xirfado ah, oo si buuxda loo habeyn karo.
Laakiin tani maahan dhammaan, tan iyo waxaa ka mid ah habka internetka. Taas oo waxaan la tartami karnaa ciyaartoy kale si ay ula dagaallamaan dabeecadeena ka sheekada sheeko.
Kulankaan wuxuu igu noqday layaab weyn, maadaama aanan fileynin inaan ka heli doono RPG gudaha Android. In kasta oo waxa iigu yaabka badan ay tahay taas Waa lacag la’aan! (Waa hagaag haddii aan sidoo kale la yaabay inay qaadatay oo keliya 6,88MB: P) Waxaad ku ciyaari kartaa gebi ahaanba bilaash iyo xitaa iyada oo loo marayo lacagaha yaryar, hel qalab wanaagsan.
Qodobka kaliya ee taban ee aan u aaneeyo ciyaartan ayaa ah inay kaliya tahay gebi ahaanba waa af ingiriisi. Waqtigan xaadirka ahna uma muuqato inuu jiro tarjumaad dhow.
Iyada oo ay taasi jirto, heerka Ingiriisiga ma sareeyo, markaa haddii aad isku difaacdo Ingiriisiga waad fahmi kartaa dhagarta dhib la'aan.
Xitaa sidaas oo ay tahay, in aan la tarjumin ma siin karo 10 sheekaduna waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan RPGs, dhibcahaydu waa: 8,5 / 10.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Noticias » Reviews » Destinia, Falanqaynta Ciyaarta
Waan jeclahay ciyaartan, sheekadu waa mid xiiso leh, xulashooyinka sida abuurista iyo abuurista hubkaaga sidoo kale aad ayey ufiican yihiin, waxaan rajeynayaa inay soo saari doonaan ciyaaro badan oo nuucaan ah. Salaan
Ku jawaab Echmol
ciyaartan waa qabow, aniga xitaa waan ila yaabay, salaan! 🙂
Jawaab Ana Del Angel
Waa wax aad u wanaagsan waxaan horeyba ugu jiray darajada kaalinta seddexaad iyo labaad ee khadka tooska ah
Ku jawaab chaser
Haddii aad tahay laba-geesle, waa isku mid inaadan xiran karin seefta 2-gacan, ama taa beddelkeeda ...
Ma jiraa qof garanaya hage / khariidad kasta? maxaa yeelay si kasta oo aan u maro khariidado marwalba waxaan wada joogaa meel isla markaana ma arko wax hawlgallo ah oo dheeri ah ... dhammaan mooryaanku way iga heer hooseeyaan aniga ... TT
Anigu kama heli karo ninka xun ruuxa godka… sideen uga helaa godkaas ???
corduroy, haddii aan dib ugu dhigno shaashadda guriga, dhammaan 3 ama mid keliya ayaa dib loo dejiyaa ..?
Haddii aan dib ugu cusboonaysiinno shaashadda guriga, yaa dib u dejinaya ..? seddexda dagaalyahan mise midka la tilmaamay ..?
Kaliya dabeecada aad rabto inaad tirtirto ayaa dib loo dejin doonaa
Waxaan joogaa heerka 46 kulankuna waa mid cajiib ah 🙂
Sababtoo ah maadan aqoonsan, waxaa lagu aqoonsaday warqad la yiraahdo rog rogaal waxaa jira hub heerkiisu yahay 1 -19, 20-39 iyo wixii la mid ah.
SIDEE AYAAN KUGU GELI KARAA QAABKA INTARIKANKA? AKI WUXUU YAHAY «MA GASHI KARTO MULTIMODE WAAYO SABABTA AH IN CIYAARTAADA CIYAARTA AH SI AAN LOOGA BADBAADIN»
Ku jawaab Maglio gonzalez
maxaa dhacaya marka qofku gaaro lv 99
Ku jawaab Corazonx321
Ku jawaab xelx xchinox
Waxaa jira hage ku saabsan sida loo ciyaaro, loo dhiso hubkaaga iyo taas, waxa dhacaya waa inaan ku baqo Ingiriisiga, waan ku qanacsanahay haddii aad i caawiso. tani waa ciyaar bilaash ah oo bilaash ah
Sideen u siiyaa geedaha nolosha gabadha si ay u bogsato odayga, maxaan sameeyaa maxaa yeelay halkaas kama bixi karo
Ku jawaab Misael velazquez
ricardo gallo dijo
Iima oggolaaneyso inaan ka ciyaaro khadka tooska ah, ma inaad leedahay heer ugu sarreeya mise waa si fudud in server-yada laga saaray?
Ku jawaab riccardo gallo
Cayaartu waa mid heer sare ah, waxaan gaaray heerka 54, qiimeynta qadka tooska ah waxaan ku ahaa 4 sano, kaliya hal shaki ayaa iga jira, sidee ku soo ceshan karaa horumarkayga oo dhan haddii aan dib u bilaabo qalabka? Miyuu jiraa qof garanaya galka nidaamka aan ku arko ciyaaraha la badbaadiyey waxaan dareemayaa sida sheldon markii WoW la jabsaday, waxaan dareemayaa in dhammaan horumarkayga khariidada, guulaha, hubka, waxyaabaha aan waxba ka jirin
Ku jawaab minashiro
ii oggolaan maayo inaan galo server-yada ayaa sheegaya qaladka 15, godadka waxaan si lama filaan ah ugu arkay meel allabari oo leh laambad guduudan oo dusha sare leh sidii ay tahay bog. Waan ku dhex socdaa oo wax dhaca ma jiraan, qofna ma garanayaa waxa ay taasi tahay?
Ku jawaab zakakaZa